Karen Community Association UK: February 2013
KCA Sheffield fundraising invitation
မြန်မာဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ခြင်း ယာယီရပ်နားမှု ထိုင်းစို...
အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အို ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွ...
We, the Karen community Association, would be honoured if you would join us at our fundraising event for the Karen community in Sheffield, but primarily to fund the internally displaced children in Burma’s Karen state.
We would like to invite you all to join us on Saturday 9th March 2013 at Mount Tabor Church, Wordsworth Avenue, Sheffield S5 8NB. We haveaguest speaker who will share up-to-date information with regard to the situation and how the changes in Burma are affecting the Karen people and their children. We will leave time at the end of the event to address any questions you may have.
A buffet of Karen and Burmese dishes will be served, and there will be tea, coffee and soft drinks available throughout the day.
£10 Tickets will be sold on the day, the profits of which will be distributed as follows:
70 % will go directly to the children of the Internally Displaced People
30 % will assist the Karen Community Association, Sheffield to fund these events.
We sincerely hope you will join us on the day. It would help us tremendously if you would please let us know if you will be joining us, to enable us to plan our delicious menu for you. We hope to see you soon.
Mount Tabor Church, Wordsworth Avenue, Sheffield S5 8NB, Saturday 09 March 2013
For further details, and to confirm your attendance please contact:
Mr Eh Htee Kaw – 07861786539 Mrs Htoo Ku Hsar Say- 07940522425
ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အကြီးတန်း စစ်ဘက် အရာရှိများ စေလွှတ်ပေးရန် KNU တောင်းဆို
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၇ မိနစ်
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)က အနာဂတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပလျှင် အဆင့်မြင့် စစ်ဘက် အရာရှိများကို စေလွှတ်ပေးရန် မြန်မာ ဗဟိုအစိုးရကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ဟု Karen News သတင်းတရပ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မြဝတီမြို့တွင် KNU နှင့် အစိုးရအကြား အစည်းအဝေး တခု ကျင်းပခဲ့ပြီး KNU ဘက်မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ကာ အစိုးရဘက်မှ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Karen News သတင်းထောက် Saw Eh Na က ဆိုရာတွင် ဒုသမ္မတ ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တံတားနှင့် မြဝတီ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့လည်း သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရရှိပြီးချိန်မှစ၍ KNU အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိကြောင်း KNU ခေါင်းဆောင်များက အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သို့ ထပ်လောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်” ဟု Karen News တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“အနာဂတ် စကားဝိုင်းများတွင် (မြန်မာ) တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ ပိုမို ပါဝင်စေသင့်ကြောင်း KNU က မြန်မာအစိုးရ ဝန်ကြီးများအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်” ဟု သတင်းထောက် Saw Eh Na က ဆိုသည်။
ထိုသတင်းဌာနတွင်ပင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားသည့် နောက်ထပ် သတင်းဆောင်းပါး တပုဒ်၌ KNU အရာရှိ စောဂျွန် က ထိရောက်ပြီး တာရှည်ခံသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ရရှိမှသာလျှင်
နှစ်ဘက်စလုံး အနေဖြင့် ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် ဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီတွင် KNU နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပမာဏ သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့သည်။
Posted by KCA.UK at 21:330comments
Posted by KCA.UK at 12:490comments
Posted by KCA.UK at 13:140comments
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
Posted by KCA.UK at 22:430comments